Shiinaha jilicsan ee PVC Furaha warshadda iyo soosaarayaasha | SJJ
Daboolka furaha PVC ee jilicsan ayaa sidoo kale magacyada u ah furaha furaha, shey xayeysiis oo kaamil ah kaliya ma qurxin karo furahaaga, laakiin sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa ganacsigaaga ama ururkaaga.
Jilicsan Daboolka Furaha ee PVCwaa shay cajiib ah si loo ilaaliyo furayaashaada oo loo muujiyo sumadahaaga iyo takhasuskaaga. Daboollada furaha PVC ee jilicsan waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan, oo leh waxyeello ku dhacday si loo gaaro qaabab iyo astaamo kala duwan. Furayaashaada albaabada, baabuurta, kiisaska iyo wixii la mid ah oo laga sameeyay alaab bir ah ayaa laga yaabaa inay fududahay in la qayilo, si loo dhigoDaboolka Furaha ee PVCwuu ilaalin karaa oo ka fogaan karaa furayaasha in la oksheeyo, tani waxay furayaasha ka dhigtaa kuwo cusub oo dhalaalaya. Si loogu dhejiyo lifaaqyo kale sida nalalka batteriga ku jira qeybta jilicsan ee PVC waxaa loo isticmaali karaa sida toosh. Naqshado kala duwan oo daboollada muhiimka ah ayaa tusi kara dabeecaddaada weyn, si aad u muujiso summadahaaga oo leh takhasus gaar ah. Cabbirka yar ee daboollada Furaha PVC ee jilicsan ayaa ku habboon in lagu hayo ama la keeno meel kasta. Maaddadu waa mid saaxiibtinimo leh oo aan sun ahayn bay'ada, waxay dhaafi kartaa Mareykanka ama heerarka imtixaanka Yurub. Dhammaan midabada PMS waa la heli karaa, midabyo badan ayaa lagu gaari karaa isla shay. Faahfaahinta waxaa lagu tusi karaa si waafaqsan naqshadahaaga.
Ujeeddooyin: Dhimasho 2D ama 3D dhinac ama laba dhinac ah
Midabada: Dhammaan midabada PMS waa la heli karaa, midabyo badan
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Guud: Giraanta boodka, Giraanta Furaha, isku xirayaasha Birta, Xargaha, Silsiladaha Kubadda, nalalka, batteriga iyo iwm.
MOQ: 100 pcs naqshad kasta
Hore: Keychains -ka jilicsan ee PVC
Xiga: Furfurayaasha Dhalooyinka PVC ee jilicsan
kiiska daboolka muhiimka ah
daboolka muhiimka ah ee iibka
Daboolka Furaha ee PVC
daboollada furaha cinjirka ah
Furayaasha Dhalada furayaasha